Sarin' i Satana nataon' i Gustave Doré ao amin' ny boky Le Paradis perdu ("Paradisa very") nosoratan' i John Milton.
I Satana na ny satana dia zava-mananaina ara-panahy tany an-danitra izay resahina ao amin' ny fivavahana abrahamika (indrindra ny jodaisma sy ny kristianisma ary ny finoana silamo) sady voalaza fa nanohitra ny sitrapon' Andriamanitra ka nitarika fanahy maro hafa koa hanaraka azy mba haka fanahy ny olombelona ka hitarika azy amin' ny ratsy sy hanimba izao tontolo izao. Fantatra amin' ny anarana hoe Devoly koa izy.
Amin' ny teny hebreo dia atao hoe שָׂטָן / śāṭān izy, fa amin' ny teny grika kosa dia Σατανᾶς / satanâs, amin' ny teny arameana dia ܣܛܢܐ / sāṭānā’, ary amin' ny teny arabo dia ﺷﻴﻄﺎﻥ / šayṭān.
Ao amin' ny jodaisma sy ny kristianisma[hanova | hanova ny fango]
Ny anaran' i Satana dia avy amin' ny teny hebreo hoe ha-satana izay midika hoe "fahavalo" na "mpifanandrina". Ao amin' ny Testamenta Taloha io anarana io dia ampiasaina ho anarana iombonana tamin' ny voalohany, izay ilazana ny mpitsikilo mirenireny nampiasain' Andriamanitra, araka ny hita ao amin' ny Bokin' i Joba (Joba 1.6-7). Rehefa mandehandeha ety an-tany i Satana dia manangom-baovao momba ny olombelona hiampangany azy eo anatrehan' Andriamanitra, araka ny Bokin' i Zakaria (Zak. 3.1). Misedra ny finoan' ny olona an' Andriamanitra koa izy, araka ny hita ao amin' ny Bokin' i Joba ihany (Joba 1.8-12). Tsy mbola aseho ho ilay fanahy fara tampon' ny faharatsiana hatreto ny Satana fa fanahy manatanteraka ny sitrapon' Andriamanitra sahala amin' ireo anjely hafa rehetra ka tsy nanana fanapahan-kevitra manokana.
Taty aoriana vao lasa anaran-tsamirery ny hoe Satana, araka ny hita ao amin' ny Boky voalohan' ny Tantara (1Tant. 21.1). Ny lovantsofina jiosy taty aoriana sy ny lovantsofina kristiana tamin' ny voalohany dia nihevitra an' i Satana ho fahavalo mpifanandrina ka tsy amin' ny olombelona ihany izany fa amin' Andriamanitra koa indrindraindrindra. Izy no noheverina ho fototry ny ratsy rehetra ka lasa lohan' ireo demony. Maro ireo fanahy ratsy nampitovizina amin' i Satana toy ny Menarana na Bibilava ao amin' ny Bokin' ny Genesisy (na Jenezy) na ny Dragona ao amin' ny Bokin' ny Apôkalipsy na Apôkalipsa (Apo. 20.2).
Ao amin' ireo boky apôkrifa, izay voasoratra teo anelanelan' ny fotoana nanoratana ny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao, sy ao amin' ny Talmud ary ny asa soratry ny raby taty aoriana dia ahitana koa an' i Samaela izay ampitovizina amin' ny Anjelin' ny Fahafatesana. Ao amin' ny asa soratr' ireo raby dia i Samaela no lasa menarana mpaka fanahy izay nahatonga ny fahalavoan' i Adama sy i Eva. Voalaza koa ho andrian' ny demony izy. Noho ireo rehetra ireo dia tsy inona ny hoe Samaela fa anaran' ny Satana mpiampanga ao amin' ny Testamenta Taloha ihany.
Ao amin' ny Kor'any dia tsy anjely fa jiny i Satana (arabo: شيطان‎/ Sheitan na Shaitan). Atao hoe Iblisy (arabo: إبليس / Iblis) koa ny anarany. Araka ny Kor'any, rehefa avy namorona an' i Adama Andriamanitra dia tsy nety niankohoka teo anatrehan' i Adama i Satana raha nandidy azy ahanao izany Andriamanitra (Kor'any 2.34). Voaroaka avy tao an-danitra noho izany izy ka niteny tamin' Andriamanitra fa hampiala ny olombelona amin' ny finoana an' Andriamanitra.
Misy anarana arabo amin' ny endrika milaza maro amin' ny anarana hoe Shaytan dia ny hoe الشياطين / Shayṭîn izay manondro karazana zavamananaina mpaka fanahy, dia ny demony sy ny olona sasany ampiasain' ny demony (Kor'any 6.112) ka eo ambany fahefan' i Iblisy.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Satana&oldid=1011108"
Voaova farany tamin'ny 5 Mey 2021 amin'ny 10:55 ity pejy ity.